Phinda ukuhlela ikhishi kanye yokugezela: ubuhle nenduduzo
Homeliness, Ingaphakathi design
Wonke umuntu ufuna ukuba siphile ekhaya ukhululekile futhi zesimanje. Wonke umuntu ufuna izindlu has ukusebenza eliphezulu. Kodwa akubona bonke abantu bangase bakwazi ukwamukela bahlala emzini omkhulu. I ethile enkulu ezindlini ezivamile kuyinto endaweni ikhishi elincane, kanye nekamelo lokugezela. Futhi udinga Ziningi ithalente ukwenza lezi amancane ungakhululekile Uma unganakile, igumbi endlini ukhululekile, ne ukusebenza ebanzi.
Futhi kulokhu, usizo olukhulu ungaba abaklami professional. Kwezinye izimo, kungase kudingeke ukuqedela kabusha izakhiwo, futhi ngezinye izikhathi nje manipulations ezimbalwa ukuze aguqule egumbini futhi kwenze kube ethokomele futhi zikhululekile. Onesimo izakhiwo kungaba isukela zobuchwepheshe zakudala ngesicelo futhi umqondo umklami.
Noma kunjalo, kukhona ezinye imithetho. Ukunikeza yokuhlela kufanele uqale ke kusukela ekhishini. Kube kumele zithobele isimiso: ungagxambukeli, nakho konke ususondele. Ikhishi isethi kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza izinkampani ezenza ifenisha oda. Le nkampani "Ikhishi Abantu" - omunye wabaholi ekukhiqizeni kwetindlu letibita kancane emakhishini siko ezenziwe nge ngokuphelele yimuphi amakhabethe usayizi futhi kufanale agqoke izikhindi zangaphansi. ifektri indawo http://www.homprojekt.ru/
Ekhishini kufanele zabelwe esishintshashintshayo ezintathu: yokudlela nezindawo abasebenza nokuwela ndawo. Ngaphezu kwalokho, indima eside division yaba izingxenye udlala ukukhanyisa, nakho kufanele zoned. ukukhanyisa Proper uzokwenza ekhishini ibe banzi, bekhululeke kakhudlwana futhi kuwusizo kakhudlwana. Ukuze ukubhaliswa kungcono ukusebenzisa ukukhanya imibala. Isichuse njengoba olungaphambili lwesonto kanye phansi, khetha usayizi encane. Kwesinye isikhathi ukubhidliza samuntu kokucabangela omunye izindonga, nge amalunga akusiyo esiphathiswa. Lapho uhlanganisa avele ikamelo ehlanganisa imisebenzi emibili - egumbini lokuphumula futhi ekamelweni lokudlela. Kulokhu, kubalulekile ukuthi ukusungula hood ezinhle phezu kwesitofu. An isixazululo esihle kakhulu ikhishi elincane kungaba ifenisha mobile sokusebenza.
Ukunikeza ukuhlela yokugezela kungabuye ufinyelelwe ngokuhlanganisa amakamelo amabili: yangasese futhi okugeza. ubuchwepheshe besimanje ukuvumela ukuba abashukumise futhi ubhavu, ukucwila nakwezinye izindawo elula kakhudlwana. Ungakwazi ukwengeza plasterboard ngodonga entsha, okuyinto kamuva usuqedile ngokhethe noma panel. Kumele kahle wacabanga ukukhanyisa, lapho kuncike egumbini induduzo: kungaba idivayisi ukukhanyisa kungaba amalambu ezimbalwa, esakhelwe ophahleni imisiwe, udonga kwelinye esishintshashintshayo. Qiniseka ukuba ucabangisise kahle ngezinselele ukuthi ufuna ukubeka ifenisha egumbini lokugezela: esitsheni for zokugeza, ibhokisi zangaphansi ngoba amathawula nelineni, futhi mhlawumbe banquette encane. Kuvele esiteji ebalulekile yokuhlelwa yokugezela kuyinto phansi. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi ocansini kuthiwa: a yenqwaba noma Tile - kwasekuqaleni, udinga ukuthi ucabange ngalokhu ungangenisi amanzi. Ngakho kungenzeka ukuze bazivikele empini nomakhelwane balo ngenxa yezikhukhula ngephutha. Qiniseka ukunikeza embundwini ozokhuthaza egcina amanzi egumbini elilodwa uma eziphuthumayo. Finishing okubalulekile yokugezela encane futhi kufanele kube enombala okhanyayo. Uma ufuna Tile ne iphethini, akufanele khetha sibalo ezinkulu, hhayi ukwenza igumbi zibukeke kancane okukhulu kakhulu.
Bayabethemba abaklami abanolwazi ungavula essentials izakhiwo egumbini ukhululekile kakhulu endlini.
Isicelo ebodeni - bekwi umhlobiso ingaphakathi
Inhlanganisela imibala emaqaqasini ekamelweni: imibono, izithombe
Ingaphakathi design lokulala tones blue
Panel okuhlobisa - "gqamisa" wezangaphakathi
Lokulala White: elicwengisiswe nenhle
Ungahlala kanjani ukupheka isitshalo seqanda elimhlophe? Ungadliwa for ebusika
Izihloko eyenziwe kudabuke - elula azwakale kamtoti
Indlela ukususa Eset Smart Security?
Air charlotte ne apula: iresiphi
Yiziphi Logistics futhi yiziphi imigomo yayo?
Imithetho eyisisekelo yokuzihlukanisa kwamangqamuzana ngokwemisebenzi yawo, isicelo wezibalo
Izibani Germicidal ngoba indlu - ibe yisibambiso nobumsulwa impilo
Sadism - Iyini? Inchazelo
Iheksagoni ejwayelekile: lokho yayinesithakazelo, nendlela yokwakha ke
Amapheshana e-Embryonic: izinhlobo zawo nezici zesakhiwo
Isiraphu ye licorice. Yokusetshenziswa